130 Chishamiso Chemunamato Chemuchato | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 130 Chishamiso Munamato Kune roorano
130 Chishamiso Munamato Kune roorano
7 Kumbira, uye uchapihwa; tsvaga, uye iwe uchawana; gogodzai, uye muchazarurirwa. 8 Nekuti umwe neumwe anokumbira anogamuchira; unotsvaga unowana; neunogogodza, uchavhurirwa.
Nhasi tichave tichiita chishamiso chekunamatira muchato. Iyi minamato ndeyokuimba kuti titende Mwari kumuchato, ndeavo avo Dhiyabhorosi akabata vakasungwa mudenderedzwa risingaperi rekukunda maererano ipapo wanano mugumo. Asi ini ndinotenda Mwari kuti sezvaunoita minamato iyi yezvishamiso nhasi, unosunungurwa muzita raJesu.
Kuroora mubatanidzwa, pakati pemurume nemukadzi, mubatanidzwa uyu wakagadzwa naMwari iye, saka roorano ndezvemagwaro. (Ona Genesi 2:24). Kuroora hakusi kwekunaka pane kushata, sekutenda kunoita maKristu mazhinji nhasi, kuti inzvimbo iyo iwe yaunotarisira kuti zvese zvakanaka nezvakaipa zviitike kwauri. Izvo hazvisi zvechokwadi zvebhaibheri, Mwari haana kumbobvira atangisa muchato kuti uve nemamiriro ezvinhu akaipisisa mairi, muchato waifanirwa kuve uri nani uye kuramba uchiita zvirinani. Zvisinei, kune vavengi vekuroora. Vavengi ava vane basa rimwe chete, rekukutadzisa kuchata, kana kunyangwe ukaroora, vanorwa newe kuti ubvise zvinotapira mumuchato wako. Asi nhasi kuburikidza nemunamato uyu wemunamato wekuroora, tiri kuzotarisa kune avo vavengi vanomira munzira yedu yekuroora.
Varume nevakadzi vazhinji vasina kuroora vanonetsekana mukutevera kwavo kwevakaroora nekuti dhiabhori akaisa chifukidziro chaSatani, achivafukidza kubva kuna Mwari wavakaroora. Vazhinji varwadziswa Marine Nyika, vachinetsana nemweya vadzimu uye nevarume vemweya, vazhinji vanobatwa uroyi maniplication, uko kwevakaroora kunogunzirwa murima rerima, vazhinji vanobatwa kuipa kweimba, mumwe munhu ari padyo navo ari kukonzera kushushikana kwavo muwanano, vazhinji vanobatwa nedhimoni strongman kubva kuimba yemadzibaba avo kana hwaro hwavo. Hazvina basa nemamiriro ako nhasi, paunenge uchiita munamato uyu wekunamatira wekuroora, kukombwa kwese kwadhiyabhorosi kuchikutadzisa kuroora kuchaparadzwa muzita raJesu.
Ndinokukurudzira kuti unamate izvi minamato minamato nokutenda, usakanda mapfumo pasi kuna Mwari, nekuti Mwari pachavo havazombokuregerera. Akataura mushoko rake, Ini handife ndakakusiya kana kukusiya, Vahebheru 13: 5. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yekunamatira yemuchato nhasi, mukati memwedzi gumi nemaviri inotevera, uchave wakaroora zvakajeka muzita raJesu. Ndinoti kwauri pamberi pe nguva, makorokoto, ndinonzwa zvipupuriro zvako muzita raJesu.
Ongorora: Mimwe yeminamato iyi ine nzvimbo dzisina munhu, zadza zita rako kana zita remunhu wauri kunyengeterera. Ungangodawo kuzadza zvimwe zvakadzama zvehupenyu hwako munzvimbo dzisina chinhu paunonamata. Mwari vachakupindura nekuchimbidza muzita raJesu.
1. Tenda Mwari nekuti Iye oga ndiye akanaka mutambo.
2. Tenda Mwari nekuti gore rino igore rako rezvishamiso zvinoshamisa.
3. Ishe, regedzai murume / mukadzi Makafanogadza semurume wemwanasikana / murume wemurume / mukadzi.
4. O Ishe, ita kuti zviitike kuti mutambo weramwari uchabuda munguva pfupi.
5. O Ishe, regai zvive munhu anokuda nemoyo wese.
6. O Ishe, simbisai imba yavo, zvinoenderana na VaEfeso 5: 20-28
7. Baba, ngavabvumidze satanic, achiachengeta kuti asasangana, muzita raJesu.
8. O Ishe, tuma ngirozi dzako dzinorwa kuti dzirwire dzadzo.
9. O Ishe, ndinotenda Makasika mwanasikana wangu / mwanakomana wangu kuve murume akasarudzika / mukadzi waMwari; zviite, muzita raJesu.
10. Ini ndinomira mugomba uye ndinomudaidza kuti arege kuvanzika muhupenyu hwake, muzita raJesu.
11. Ini ndinoramba kupiwa kwemanyepo nemuvengi, muzita raJesu.
12. Ndakagura kuyerera kwechinetso chewanano chekugara muhupenyu hwevana vangu, muzita raJesu.
13. Ishe, regai kutsungirira kutonge muhupenyu hwe. . . (taura zita remunhu wacho) kusvikira munhu chaiye auya, muzita raJesu.
14. Baba, muzita raJesu, saAbrahama paakatuma muranda wake kunotsvaga mwanakomana wake, Isaka, mukadzi, wotumira Mweya Mutsvene kuti uunze mwanasikana wangu / mwanakomana, murume / mukadzi.
15. Ishe, zivisai _ _ _ zvakavanzika zvinodiwa pakukanganisa kwake kwewanano.
16. Batsira _ _ _ Ishe, kuti azive zvake chaiye.
17. Kufunga kwese kwemuvengi, kunopesana nehupenyu hwekuroora kwe _ _ _ kuitwe kushaya simba, muzita raJesu.
18. Rega _ _ _ ramba kubatana pamwe neanopokana-nemuchinda kuperetera uye kutuka, muzita raJesu.
19. Ini ndinodzima kushamisa kwese, kwakagadzirirwa kupokana ne _ _ _ muwanano, muzita raJesu.
20. Simba rose, kugutsa vanhu zvisiri izvo kuti _ _ _ vafe mitezo, muzita raJesu.
21. Ini ndinotyora chibvumirano chose chekutadza kwemuchato uye wanano yekunonoka ye _ _ _ muzita raJesu.
22. Ndinokanzura muchato wese wemweya, unoitwa uchiziva kana kusaziva ndakamirira _ _ _ muzita raJesu.
23. Ini ndinobvisa ruoko rwekuipa kweimba kubva muhupenyu hwekuroora hwe _ _ _, muzita raJesu.
24. Zvese incantation, incision, hex uye zvimwe zvinokuvadza zvemweya, zvinoshanda zvinopesana nemuchato we _ _ _, ngazvipiwe zvachose, muzita raJesu.
25. masimba ese ehunyengeri hwakaipa, achinonoka kana kukanganisa muchato we _ _ _, gomara zvizere, muzita raJesu.
26. Rega zvese zvakashata zvinopesana nemuchato muhupenyu hwe _ _ _ kuputsa, muzita raJesu.
27. Aiwa, Ishe, dzosa _ _ _ iyo nzira chaiyo yamakasika iye kana iye achinge ashandurwa.
28. Baba, Rega moto wako uparadze chero chombo chaSatani, chakagadzirirwa kurwisa muchato wa _ _ _, muzita raJesu.
29. Ini ndinosiya chero zvivi zvemunhu zvakapa muvengi pane zvekuroora zve, muzita raJesu.
30. Ini ndinotora pasi rese randakarasika kumuvengi, nezve hupenyu hwekuroora hwe _ _ _, muzita raJesu.
31. Ropa raJesu, taura zvinopesana nesimba rose rinoshanda kupesana nemuchato wa _ _ _.
32. Ini ndinoisa Ropa raJesu kubvisa zvese zvinokonzereswa nekuipa kushanda nekudzvinyirira, muhupenyu hwa _ _ _, muzita raJesu.
33. Ini ndinotyora simba rinosunga kwechinhu chero chipi zvacho chakaipa, chakamboiswa pane _ _ _ kubva chero kupi zvako, muzita raJesu.
34. Ini ndinobvisa iwo kodzero yemuvengi kuti atambudze hurongwa hwe _ _ _ kuroora, muzita raJesu.
35. Ini ndinotyora hutapwa hwese hwekugarwa nhaka yemuchato, muhupenyu hwa _ _ _, muzita raJesu.
36. Ini ndinosunga uye ndinopamba nhumbi dzemurume wese ane simba, akasungirirwa kumuchato wa _ _ _, muzita raJesu.
37. Vatumwa vaMwari mupenyu, vanokungurutsa ibwe rinodzivirira kuparara kwemuchato _ _ _, muzita raJesu
38. O Mwari simuka urege vavengi vese vekuroora kwemuchato ka _ _ _, vaparadzire, muzita raJesu.
39. Moto waMwari, nyungudusa mabwe anotadzisa maropafadzo emuchato e _ _ _, muzita rakasimba raJesu.
40. Iwe gore rakaipa, unovharira chiedza chezuva chekuputsika kwemuchato _ _ _ kupararira, muzita raJesu.
41. Midzimu yose yakaipa, ichigadzirira kunetsa hupenyu hwewanano hwe _ _ _, sungwa, muzita raJesu.
42. O Ishe, regai zvinoshamisa shanduko ive yakawanda ye _ _ _ yegore rino.
43. O Ishe, tendeuka vese vanoda kuseka, kuodza mwoyo kana kutadza _ _ _, muzita raJesu.
44. Chero muroyi, akaitwa pasi pemvura chero ipi neipi kupesana nehupenyu hwe _ _ _, gamuchira kutongwa kwemoto nekukasira, muzita raJesu.
45. Aritari yega yega yakaipa, iri pasi pemvura chero panenge pakaitirwa zvakaipa nezvimwe muzita raJesu.
46. ​​Mupristi wese, unoshumira chero paatari yakaipa, ichipesana ne _ _ _ mukati memvura ipi neipi, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.
47. Chero simba, pasi porwizi kana gungwa, riri kure-rinodzora hupenyu hwe _ _ _, riparadzwe nemoto uye ini ndinomuzunungura kubva pamubatirira, muzita raJesu.
48. Chero girazi rekuona rakaipa, rakamboshandiswa pamusoro pe _ _ _ pasi pemvura ipi neipi, rakaputsika kuita zvidimbu zvisingadzivisiki, muzita raJesu.
49. Humwe huroyi hwemumvura hwakaunza mweya murume / mukadzi kana mwana muzviroto zve _ _ _ zvakagochwa nemoto, muzita raJesu.
50. Wese mumiriri wehuroyi hwemumvura, anozviti _ _ _ _ murume / mukadzi kana mwana, muzviroto zvake, zvakagochwa nemoto, muzita raJesu.
51.Mumiriri wega wega muroyi, akasungwa nemuchato we _ _ _ kuti umushungurudzire, wira pasi uparare izvozvi, muzita raJesu.
52.Mumiriri wega wega muroyi, akapihwa mukana wekurwisa mari ye _ __ kuburikidza nehope, anowira pasi aparara, muzita raJesu.
53. Ndinoputsa nhare dzose dzehuroyi, uroyi, jini nekuuka, zvakagadzirwa ne _ _ _ nevaroyi vemumvura, muzita raJesu.
54. Kutinhira kwaMwari, tsvaga uye uparadze huroyi hwese hwegungwa hwunobatanidzwa apo kufunga nezvisarudzo zvakambogadzirwa kupokana _ _ _, muzita raJesu.
55. Chero mweya wemvura kubva kumusha kwangu kana kwandakaberekerwa, ndichiita zveuroyi kupesana _ _ _,
kudamburwa neshoko raMwari, muzita raJesu.
56. Chero chombo chekunamata cheuipi, chakagadzirirwa kurwiswa _ _ _ pasi peswizi chero kana gungwa, yakaomeswa nemoto waMwari, muzita raJesu.
57. Chero simba rehuroyi hwemumakungwa, rakabata chero makomborero e _ _ _ muhusungwa, gamuchira moto waMwari uusunungure, muzita raJesu.
58. Ndinosunungura pfungwa nemweya we _ _ _, kubva muhusungwa hwevaroyi vezvemanzini, muzita raJesu.
59. Cheni chero ipi zvayo yehuroyi hwemumvura, inosunga maoko netsoka _ _ _ kubva pakubudirira, kutyora nekupwanya kuita zvidimbu, muzita raJesu.
60. Miseve yega yega, yakapfurwa muhupenyu hwe _ _ _ kubva pasi pemvura chero ipi neipi neuroyi, ibuda uye udzokezve kumutumira, muzita raJesu.
61. Chero zvinhu zvakashata, zvikaendeswa mumuviri we _ _ _ kuburikidza nekuwonana neanoteedzera muroyi wemumvura, akagochwa nemoto, muzita raJesu.
62. Kusvibiswa kwega kwega kwechikadzi kwemurume wemukadzi wemukati / mukadzi mumuviri we _ __, kufuratirwa kunze, neropa raJesu.
63. Chero zita rakaipa, rakapihwa _ _ _ pasi pemvura chero ipi, ini ndinoriramba uye ndinoridzima neropa raJesu.
64. Chifananidzo chese, chakavakirwa pasi pemvura kuti ishandise _ _ _, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.
65. Chero zvakaipa, zvakaitwa pamwe ne _ _ _ kusvika pari zvino, kubudikidza nehun'anga hwemumasango, kudzvinyirira uye kunyengera, ngazvidzorerwe neropa raJesu.
66. Mweya wemurume / mukadzi wemweya, sunungura _ _ _ nemoto, muzita raJesu.
67. Wese wemweya mukadzi / murume, anofa, muzita raJesu.
68. Zvese zvawakaisa iwe murume / mukadzi wemweya muhupenyu hwa _ _ _, buda nemoto, muzita raJesu.
69. Simba rese, iro ririkushandira kupokana nemuchato we _ _ _, donha pasi uye kufa, muzita raJesu.
70. Ini ndinorambana uye ndinoramba muchato we _ _ _ nemweya chero murume kana mukadzi, muzita raJesu.
71. Ndinotyora zvibvumirano zvese zvakapinda nemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.
72. Iwe kutinhira moto waMwari, kutsva kuita madota, jasi remuchato, rin'i, mifananidzo nezvimwe zvese zvinoshandiswa, zvekuroora, muzita raJesu.
73. Ini ndinotumira moto waMwari kupisa chitupa chewanano kumadota, muzita raJesu.
74. Ini ndinotyora ropa rega rega uye mweya wakasungwa-chisungo nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu.
75. Ini ndinotumira kutinhira moto waMwari kunopisa kuita madota vana vakazvarwa kumuchato, muzita raJesu.
76. Ini ndinobvisa ropa, mate, kana chero chimwe chikamu chemuviri we _ _ _, ndakaiswa paatari yemurume wemweya kana mukadzi wemweya, muzita raJesu.
77. Iwe mumweya wemweya kana mukadzi wemweya, uchitambudza hupenyu nemuchato wepanyika we _ _ _, ini ndinokusunga necheni dzakapisa uye nematare, uye ndakakudzingira kunze kwehupenyu hwake mugomba rakadzika uye ndikuraira kuti usazombo huya muhupenyu hwake zvakare, muzita raJesu.
78. Chero zvivakwa zve _ _ _ zvako zvaunazvo munyika yemweya, kusanganisira zvekumberi uye chero zvakashandiswa kumuchato nezvibvumirano, ngazvidzorerwe, muzita raJesu.
79. Ndinomesa _ _ _, yezvinhu zvese zvakashata zvakaiswa mukati make / muviri wake, nekuda kwehukama hwake hwepabonde, muzita raJesu.
80. O Ishe, tumirai Mweya Wenyu Mutsvene mweya mumudzi we _ _ _, pisai zvinhu zvese zvisina kuchena zvakaiswa mukati maro nemweya wemurume kana kana mukadzi wemweya, muzita raJesu.
81. Ini ndinotyora musoro wenyoka yakaiswa mumuviri we _ _ _ nemurume wemweya kana mukadzi wemweya kuti amuitire zvakaipa uye nekuraira kuti ubude, muzita raJesu.
82. Chero chipi zvacho chakaipa, chakaiswa muhupenyu hwe _ _ _, kumudzivirira kuti arege kuvana vana pasi, kunatswa neropa raJesu.
83. O Ishe, gadzirisa uye dzorera chero kukuvara kunoitwa kune chero chikamu chemuviri uye wepanyika muchato we _ _ _, nemurume wemweya kana mukadzi wemweya, muzita raJesu.
84. Ini ndinoramba uye ndinodzima kutuka kese, kududza zvakaipa, kuperetera, jinx, huro uye kutadza, kwakaiswa pamusoro _ _ _ nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.
85. O Ishe, regai _ _ _ vatore vagotora zvese zvavo zvepanyika zviri mumaoko emurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.
86. Iwe murume wemweya kana mukadzi, furatira _ _ _ zvachose, muzita raJesu.
87. Ini ndinoramba uye ndinoramba zita rakapihwa _ _ _ nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu.
88. Ndinopupura uye kupupura kuti Ishe Jesu Kristu ndiye Murume_ _ _ wekusingaperi, muzita raJesu.
89. Ndinonyorovera _ _ _ muropa raJesu uye ndinobvisa mucherechedzo wakaipa waakaiswa paari, muzita raJesu.
90. Ini ndinosunungura _ _ _ ndakasununguka kubva kunhare, simba rinodzora uye kusungwa kwemurume wemweya kana mukadzi wemweya, muzita raJesu.
91. Ndinoomesa simba rekudzora kure uye basa, raishandiswa kudzikamisa wanano yepanyika ye _ _ _ uye kumutadzisa kubereka vana kumurume wake wepanyika, muzita raJesu.
92. Ndinozivisa kumatenga kuti _ _ _ akaroora zvachose kuna Jesu.
93. Chiratidzo chega chega chemuchato wakashata, chinofanira kuzunzwa kubva muhupenyu hwa _ _ _, muzita raJesu.
94. Zvese zvakaipa zvinonyorwa, zvakanyorwa nepeni yedare, ngazvipwe neropa raJesu.
95. ndinounza ropa raJesu mumweya usingade kutendera _ _ _ kuenda, muzita raJesu.
96. Ini ndinouya neropa raJesu pane humbowo hwese hunogona kushandurwa nemweya yakaipa kupesana _ _ _.
97. Ini ndinosvitsa kupokana-kusheedzera kumatenga vachipokana nemuchato wese wakashata, muzita raJesu.
98. Ini ndinoramba kupa chero chiratidzo, icho muvengi angashandisa kupokana _ _ _, muzita raJesu.
99. Zviratidziro zvaSatani, ngazviparadzwe neropa raJesu.
100. Ini ndinokuzivisa kwauri mumweya wemweya / murume wemweya kuti hapana nzvimbo yako muhupenyu hwe _ _ _, muzita raJesu.
101. O Ishe, gadzira _ _ _ mota yekununurwa.
102. O Ishe, mvura _ _ _ kubva pamvura yaMwari.
103. O Ishe, regai kusimuka kwekusingaperi kwevavengi kukanganiswe.
104. O Ishe, chengetedza Iko kufarira kwako muhupenyu hwe _ _ _.
105. Zvese zvakanyorwa zvinopesana ne _ _ _ kutenderera kwemwedzi, zvidzimwa, muzita raJesu.
106. Zvese zvakarongedzwa muzuva, mwedzi nenyeredzi zvinopesana _ _ _, ngazvibviswe, muzita raJesu.
107. Chese chinhu chakaipa, chinorongwa mukati merudzi rwe _ _ _, ngadzimwe neropa raJesu.
108. O Ishe, zunzai mwaka wekutadza uye kuvhiringidzika kubva kuhupenyu hwe _
109. Ini ndinopidigura mutemo wese wakashata, ndichipesana nehupenyu hwa _ _ _, muzita raJesu.
110. Ini ndinogadza nguva nyowani, mwaka uye mutemo unobatsira we _ _ _, muzita raJesu.
111. Ndinotaura kuparadza kumizinda yamambokadzi wegungwa neyezizi, muzita raJesu.
112. Ini ndinotaura kuparadzwa kudzimbahwe remweya weIjipita uye kupururudza maatari avo, muzita raJesu.
113. Ini ndinotaura kuparadzwa kumaatari kutaura ndichipokana nechinangwa chaMwari chehupenyu hw _ _ _, muzita raJesu.
114. Ini ndinoparidza _ _ _ mhandara yaIshe, muzita raJesu.
115. Chidzitiro chese chakaipa chiri pa _ _ _ _ ngachivhurwe, muzita raJesu.
116. Rusvingo rwese pakati pe _ _ _ nekushanyirwa kwaMwari, ngaruvhunduke, muzita raJesu.
117. Iwe kuraira kwaMwari, kubudirira muhupenyu hwa _ _ _, muzita raJesu.
118. Ini ndinoparadza simba re chero mbeu yedhimoni muhupenyu hwe _ _ _ kubva mudumbu, muzita raJesu.
119. Ndinotaura kune gedhi rekumberi re _ _ _ kupidigura mweya yese yevabereki yakaipa, muzita raJesu.
120. ndinotyora joko remweya, ndichiwana iwo masuo ekubereka e _ _ _, muzita raJesu.
121. O Ishe, regai Nguva Yako yekuzorodza iuye pa _ _ _.
122. Ini ndinounza moto kubva kuatari yaIshe, pamuchato wese wakashata, muzita raJesu.
123. Ndinonunura _ _ _ kubva kumiteyo yese yebonde neropa raJesu, muzita raJesu.
124. Ini ndinodzima kunyorwa kwezita ra _ _ _ pane chero zvakaipa zvinyorwa zvemuchato, muzita raJesu.
125. Ini ndinobvuma kuti Jesu ndiye mukadzi wekutanga wa _ _ _ uye ane godo pamusoro pake.
126. O Ishe, uyai nekurangaridza kwe _ _ _, yega yega yemweya chibvumirano uye chibvumirano.
127. Ropa raJesu, geza _ _ _, pazvinhu zvese zvakasvibiswa, muzita raJesu.
128. O Ishe, pokana nevano kukwikwidza nehupenyu hwekuroora hwe _ _ _.
129. O Mwari simuka muparadzire muvengi wese wewanano ye _ _ _
130. Tangidza kutenda Mwari, nerudzikunuro rwako.
Previous nyayaMapepa emunamato ekufambira mberi Muhupenyu
inoteveraKubata Nezvidhori Zvemba yaBaba Vangu
Samkelo Mxolo Zvita 21, 2019 At 9:09 pm
Ndinotenda Mwari vakatondinunura kubva muhusungwa hwese munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu .Amen
shiellah Deborah Kurume 12, 2020 At 2:24 pm
ndinotenda MWARI vandinunura uye vanoenda kuzondikomborera nekuroora gore rino thank you ishe
Ane chipo Ojike Kubvumbi 11, 2020 At 12:57 am
Mhoroi ... Wangu mubvunzo….
Ndiri mukadzi asina murume ari kusvitsa makore makumi matatu,
Ndakaona zvakaoma kwazvo kudzima mumwe mukomana wandinoda kwazvo asi haana nguva yangu kana kundipa hanya kana kundidana. Pese pandinoda kukanganwa nezvake, zvinokurumidza kudzoka shure, pese pandinenge ndichinamatira Hupenyu shamwari, Iye achatanga kutanga kuoneka, ndinomuda asi haandide .. nguva dzose mumoyo mangu, uye zvakandiomera kuti ndikanganwe nezvake .. Ndinoramba ndichinamata uye akaramba achingopenya mupfungwa dzangu.
Pls chii chandinoita…
Batsirai tete kunze ..
Kutenda uye Mwari varopafadze
Kubva kuna Chipo
Nashale Kubvumbi 12, 2020 At 5:38 pm
Ndanga ndichinamata muchato wangu iyi hongu muzita raJesu
Philodass Chikunguru 2, 2020 Na2: 46 pm
My frist of my prayer in the jesus with 130 miracle prayer I shuld get married with inAugust it shuld miracle life to me I pray each day to miracle in my I love u lord christ muzita rajesu amen….
Amy Chikunguru 12, 2020 At 4:35 am
Mhoro zita rangu ndinonzi Amy cincotta, ini ndine 38yrs. Uye ndichiri ndisina kuroorwa, nhasi ndiri pano ndichinamata nezvangu kuwana murume / murume ane rudo. Ndine rutendo rwechokwadi muna Jesu, amai vangu vanodada neni nekuda kwekutenda kwakasimba maari. Mwari vanoziva zvakatinakira, ini handidi kuve ndisina kuroorwa hupenyu hwangu hwese. Ndokumbirawo muzita raJesu ndibatsireiwo, ndine rudo rweHowie. Asi ini handina chokwadi kana asiri iye, kuti ndinotya kuti handizopedzisira ndaroora murume wangu wandakazoroora. Handina chokwadi zvachose ndiani Akandikodzera, Ndatenda nekuteerera Jesu amen xo
Ebogu kimberly Gumiguru 24, 2020 Pa 9: 00 am
Ini ndakaropafadza zita raMwari nekuita kuti ndione munamato uyu pamhepo. Ndinotenda Mwari vandipindura, ndichauya uye ndichazviita nekukurumidza. Ndatenda changamire uyezve Nyasha. Kubva kuEbogu kimberly.
arikupurath chacko Kuruvilla Ndira 15, 2021 At 3:33 pm
Unogona kunditumira chinyorwa chemunamato pane yangu email ack403 @ gmail.
Yogesh Kurume 15, 2021 Pa 11: 01 am
valentina ankomah Kubvumbi 17, 2021 At 8:46 pm
Ndatenda Mwari nekundinunura🙏🙏🙏
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Zvakaipa Kurota
Maminitsi zana Emunamato Wekukunda Vavengi